सहिद दुर्गानन्द झाको शव यसरी पार्यो बेपत्ता | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » सहिद दुर्गानन्द झाको शव यसरी पार्यो बेपत्ता
सहिद दुर्गानन्द झाको शव यसरी पार्यो बेपत्ता
SAHARA TIMES Wednesday, January 30, 20190No comments
गणतन्त्रका लागि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्नु भएका दुर्गानन्द झाको मृत्युको ४५ वर्षपछि देशमा गणतन्त्रको घोषणा भयो । माघ १५ गते उहाँको ५५ स्मृति दिवस मनाइएको छ । जनकपुरमा काँग्रेस र विभिनन संघ संगठनले छुट्टा छुट्टै स्मृति दिवस मनाएको छ तर उहाँका लागि काठमाडौ पुरै सुनसान रह्यो । नकाँग्रेसले सम्झ्यो, न मधेशवादी दलले मनायो । सरकारले दुर्गानन्द झालाई सहिद घोषणा गरेपनि कुनै सुविधा दिएको छैन । न उहाँको नाममा सडक छ, अस्पताल छ न स्कूल ।
२०२० माघ १४ गते दुर्गानन्द झालाई उहाँका श्रीमति काशीदेवी झा र उहाँका आमा भेट्न गएका बेला उहाँल ‘नरोऊ, गणतन्त्र अब आउँछ–आउँछ । तिमीहरू गाउँ जाऊ । नरुनु होस् आमा, कुनै दिन तपाईलाई दुर्गानन्द झाको आमा भनेर सबैले गर्व गरेर हेर्नेछन् । गणतन्त्र अब आउँछ–आउँछ ।’ उहाँले श्रीमतीलाइृ भन्नुभएको थियो, , ‘यो हाम्रो अन्तिम भेट हो, मेरा कारणले तिमीहरुको नाम देशभर चल्छ ।’ ।
फाँसी दिँदाको दिनसम्म दुर्गानन्द झा र काशीदेवी झाको विहे भएको ३ वर्ष पनि पुगेको थिएन । एउटा नव दुलही जसको श्रीमानको मृत्यु तय भइसकेको छ र उहाँलाई भेट्न जेलमा जानु भएको थियो । भावविहिल नव दुलही काशीदेव झालाई दुर्गानन्द झाले ‘दो हंसो को जोडा विछड गयो रे, गजब भयो रामा जुल्म भयो रे’ विरहको गीत सुनाउने गर्थे । काशीदेवी झालाई अहिले पनि ती हिजै मात्र सुनेको जस्तो लाग्छ । २०२० माघ १५ गते फाँसी दुर्गानन्द झालाई फाँसी दिएको थियो । त्यसपछि काँग्रेस पटक पटक सरकारमा सहभागी भए तर सहिद घोषणा गराउन सकेका थिएनन् ।
अन्ततः तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७२ फागुन १९ गते उनलाई सहिद घोषणा गरे । गणतन्त्रका लागि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्नु भएको थियो दुर्गानन्द झा । २०६५ जेठ १५ गते बसेको सविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गरेको थियो ।
को हुनुहुन्छ दुर्गानन्द झा ?
वि.सं. १९९९ वैशाख १४ सहिद दुर्गानन्द झाको जन्म धनुषाको जटही गाउँमा देवनारायण झा र सुकरमारीदेवी झाको एक मात्र सन्तानको रुपमा भएको थियो । घरको एक्लो सन्तान भएकाले मेट्रिकमा पढ्दापढ्दै २०१७ साल १४ वर्षीया काशीदेवी झा सित उहाँको विवाह भएको थियो । दुर्गानन्द झाको बुवाको निधन भएपछि आमाको रेखदेखमा गाउँबाट ५ किलोमिटर पर भारतीय क्षेत्रको उभगाँव स्थित दिनदयाल हाई स्कुलमा झाको शिक्षादीक्षा भएको थियो ।
एक वर्षको दाम्पत्य जीवनमा गर्भवती श्रीमतीलाई छाडेर लोकतन्त्रको संघर्षमा लाग्नुभएकोले घरमा एक्लै श्रीमती र बुद्धा आमा हुँदा आवश्यक हेरचाह नभएर बच्चा मृत जन्मेको थियो । हाइस्कूलमा अध्ययनरत दुर्गानन्दको अधिक समय छात्रबासमा बसेर र राजनीतिमा बित्ने हुनाले काशीदेवीसित उसको भेट महिनामा एक आध चोटीभन्दा बढी हुन सकिरहेको थिएन ।
२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले चालेको निरकुँश कदमको विरुद्धमा काँग्रेसले आन्दोलन शुरु गरेको थियो । आफ्ना आमाबाबुका एक मात्र सन्तान र नवविवाहित दुर्गानन्द झाले प्रजातन्त्रलाई हत्या गर्नेलाई नछाड्ने भनि मनमा ठानिसक्नु भएको थियो । भारतको जयनगरमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका काँग्रेसका नेता सरोज कोइरालाको सम्पर्कमा पुगी राजामाथि बम प्रहार गर्ने योजना उहाँले बनाउनु भएको थियो । २०१८ माघ १९ गते जनकपुर भ्रमणमा आएको बेला महेन्द्रमाथि बम प्रहार गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो । र, त्यसलाई सफल पार्न उहाँले आँट गर्नुभएको थियो ।
कडा सुरक्षाबीचमा रहेका महेन्द्रमाथि जानकी मान्दिरमा बम प्रहार गर्नुभएको थियो । तर बम पड्केन, महेन्द्र चढेको गाडीको सीशामा लाग्यो । बम प्रहार गरेर त्यत्रो सुरक्षा बीचबाट उहाँ भाग्न सफल हुनुभएको थियो । उहाँ भागेर जनकपुरकै मन्दिरमा डेरा गरी बसेका हेमचन्द्र चौधरी र भोगेन्द्र चौधरी बसेको कोठामा बस्नुभयो । भोलिपल्ट हातमा लोटा लिएर विहानै विहानै निस्किनु भएको थियो र त्यहाँबाट भारतको उभगाँव पुग्नुभएको थियो ।
यता बम कण्डका नाममा विभिन्न व्यक्तिलाई धडपकड गरिरहेको थियो । देशैभरि हलीखली भएको थियो । बमकण्डको आरोपमा पक्राउ परेकालाई तत्कालिन सरकारले थुनामा राखेर यातना दिइरहेका थिए । दिनहुँ कुटपिट गर्थे । तर बम फाल्ने को थिए भनि पत्ता लगाउन सकेका थिएनन ।
बम प्रहार गरी सीमापारी काँग्रेसको छतौनी क्याम्पमा बसेका दुर्गानन्द झालाई निर्दोषलाई कुटपिट गरी यातना दिएको कुराले सहय भएन । अनि उहाँ जयनगरबाट रेल चढेर जनकपुरका लागि हिडेका थिए जनकपुर नपुग्दै उहाँ तत्कालिन एसपी मानबहादुर राईको नतेृत्वमा गएका टोलीबाट पक्राउ पर्नुभएको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्ट परकौली सैनिक ब्यारेकमा ल्याउर हेलिकप्टरबाट काठमाडौंको केन्द्रीय कारागारमा ल्याएको थियो । गिरफतारी भएपछि उहाँमाथि राजद्रोहको मुद्दा चलाइएका थियो ।
फाँसी दिन कानुन संशोधन
जनकपुरका वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले बमकाण्डको अध्ययन गर्नका विशेष अदालतका न्यायाधीश पशुपतिप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा झपटसिंह रावल र गुणनाथ उपाध्याय सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो । त्यो आयोगले आयोगले २०१९ भदौ १९ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा दुर्गानन्द, अरविन्द ठाकुर, दलसिंह थापालाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर, ब्राह्मणलाई मृत्युदण्ड दिनुहुँदैन भने कुरा त्यतिबेलाको कानुनमा उल्लेख थियो ।’
कानुनमा त्यस्तो कुरा उल्लेख भएको थाह पाएर परिवारका सदस्यहरुले आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्ट र मीनबहादुर थापाले २०१९ पुस ५ मा उजुरी कर्तालाई झिकाउने आदेश दिनु भएको थियो । त्यही सालको फागुन २० मा न्यायाधीशहरू दुर्गादत्त उपाध्याय र भैरवप्रसाद उपाध्यायले विशेष अदालतकै निर्णय सदर गर्नुभयो । २०२० भदौ १ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरी सबैलाई समान सजाय दिने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख भयो ।
२०२० माघ १५ गते राति दुर्गानन्दलाई त्रिपुरेश्वर जेलको रुखमा दुईपल्ट झुण्ड्याउँदै उतार्दै गरिएको थियो । त्यसबखत पनि दुर्गानन्दलाई माफी मागी बिन्तीपत्र लेख भनिएको थियो, तर उहाँ मृत्युदण्डलाई नै शिरोधार्य गर्नुभयो । उहाँलाई फाँसी दिएपछि श्रीमति काशीदेवी र उहाँको आमालाई जानकारी दिएको थियो । दुर्गानन्दकी आमाले लाश मागे पनि दिइएन । पछि कुशको लाश बनाएर दुर्गानन्दको भारतको गयामा अन्तिम संस्कार गरेको थियो ।
सहिद पत्नी काशीदेवी झा अहिले आफ्ना माइतमा आश्रित हुनुभएको थियो । उहाँलाई नराज्यले कुनै सोधखोज गरेको छ न कुनै पार्टीले । जुन पार्टीका लागि उहाँका श्रीमान दुर्गानन्द झाले आफ्नो ज्यान दिनुभयो, त्यो पार्टीले अब त बलिदानी दिवस मनाउन समेत छाडि सकेका छन् । पहिलो सविधानसभामा तत्कालिन तमलोपाबाट समानुपातिक सांसद भएकी काशीदेवी झा कानुन राज्यमन्त्री समेत बन्नुभएको थियो । मन्त्रीबाट हटेपछि न तमलोपा (अहिले राजपा) ले खोजेको छ न काँग्रेसले नै । उहाँलाई कसैले सोधखोज नगरेपछि उहाँ अहिले आफ्नो भतिजा डा.जितु ठाकुरसँग बस्दै आउनु भएको उहाँका आफन्त निरञ्जन झाले बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको चुनावको समय जनकपुरबाट निर्वाचन लडेका राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले दुर्गानन्द झाको नामबाट बनेको प्रवेशद्धारामा भ्रयाङबाट माथी चढेर मल्यार्पण गर्नुभएको थियो ।
तर, उहाँ चुनाव जितेपछि एकपटक पनि दुर्गानन्द झाको परिवारको बारेमा सोधखोज गर्नुभएको थियो । यहाँसम्म कि दुर्गानन्द झाको बलिदानी दिवसको अवसरमा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर सम्झने काम गरेको छैनन् ।
न अस्पताल, न स्ट्याचु
तमलोपा सरकारमा भएको बेला दुर्गानन्द झाको नामबाट उनको गाउँ जटहीमा अस्पताल बनाउने निर्णय गराएको थियो । तर हालसम्म त्यो अस्पताल बनेको छैन । नयाँ नयाँमा त्यसको चर्चा भएपनि अहिले चर्चा पनि हुन छाडेको छ । जनकपुरमा दुर्गानन्द झाको स्ट्याचु राख्ने निर्णय भएको छ । स्ट्याचु तयार पनि भइसकेको छ तर कहाँ राख्ने भनि निर्णय अझैसम्म भएको छैन । राजेश्वर नेपालीले महेन्द्रमाथि बम हानेको ठाउँ जानकी मन्दिर परिषरमा स्ट्याचु राख्ने अडानमा छन् भने जानकी मन्दीर प्रशासनले त्यहाँ राख्न दिनका लागि मानिरहेको छैन ।